Soosaarka dabka Shiinaha Warshad iyo Warshad | Jiashun
Taxanaha bustaha aan dabka laynin badanaa waxaa laga sameeyaa fiber-ka dabka iyo dabka aan guban kareyn waxaana lagu farsameeyaa habka gaarka ah. Astaamaha ugu muhiimsan: guban karin, heerkul sarreeya u adkaysta (550 ~ 1100 ℃), qaab dhismeed is haysta, xanaaq la'aan, qaab jilicsan iyo mid adag, oo fududahay in la duubo walxaha dusha sare iyo qalabka aan sinnayn. Bustaha dabka ka ilaalin kara shayga meel ka fog goobta kuleylka iyo dhimbilaha, iyo gebi ahaanba ka hortagga ama go'doominta gubashada. Waxay leedahay astaamo aad u fiican oo ah 550 resistance caabbinta heerkulka ee fiber galaaska iyo 260 resistance heerkulka iska caabinta ee silica gel daaha,
1. Heerarka yar ee dabka saliida / dufanka iyo ololka
2. Waxa kale oo laga duubi karaa madaxa iyo jidhka si looga ilaaliyo ololka iyo ololka 3 ， markaad ka cararayso qolka gubanaya, ama ka ilaalinta birta dhalaalaysa
4. Maro adag oo dun leh oo dusha sare leh; dhammaan geesaha waxaa lagu xardhay dunta dabka ka caagan
5. Xidhmada dhow waxay si weyn u yareysaa qadarka oksijiin hawo leh oo la heli karo si dabka loo quudiyo
6. Ku xidhxidhan weel marin looga helo oo isla markiiba lagu dhajin karo gidaarka ama lagu kaydin karo meel kasta oo laga geli karo
7. astaanta waa la habeyn karaa, rarkuna wuxuu noqon karaa
Jikada jikada, qolalka waayeelka, qolalka jiifka ee iskuulada, qolalka cisbitaalada, meelaha madadaalada, hudheelada, dhismayaasha dhaadheer ee ganacsiga iyo guryaha la degan yahay, Yi Guryaha waayeelka, guryaha daryeelka carruurta, bulshooyinka la deggan yahay, qolalka jiifka ee warshadaha, suuqyada laga dukaameysto, kafateeriyada internetka, gawaarida, xarumaha gaaska, macbudyada , xabsiyada iyo meelaha kale ee dadku ku badan yahay.
Waxaan nahay soo saaraha tan iyo 2000.
2. Ma bixin kartaa adeegga OEM?
3. Ma ii soo diri kartaa muunad? Ma bilaashbaa?
Haa, tijaabada waa bilaash. Laakiin lacagta dirista waa inay ahaataa dhinacaaga.
4. Qiimaha aad i siiso, wuxuu noqon karaa mid dhimis badan?
Waxay ku xirnaan doontaa tirada dalabka.
5. Ma jiraan wax dammaanad ah?
Caadi ahaan muddadayaga dammaanadda waa lix bilood. Haddii ay tahay dhibaato xagga tayada ah, waxaan taageereynaa beddelaad, soo celin.
6. Qaabka gaadiidka
Badda, hawada, dirista, tareenka.
7. Waa maxay tayada alaabtu?
Jawaab celinta macaamiisha ayaa muujineysa “tayadu aad ayey u wanaagsan tahay! ”
8. Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada?
Caadi ahaan 7-30 maalmood kadib helitaanka lacagta hordhaca ah. Muunado ayaa lagu diyaarin doonaa 1-3 maalmood gudahood.
Hore: buste alxanka marogtada ah
Xiga: maro dhalaalaya dahaarka acrylic